2 ka mid ah eedeysanayaal loo haysto xatooyada carruurta oo xabsiga ku sii jiri doono – Radio Damal
2 ka mid ah eedeysanayaal loo haysto xatooyada carruurta oo xabsiga ku sii jiri doono
Maxkamadda dalka ayaa amartay in labo ka mid ah maamulayaasha isbitaalka Mama Lucy Kibaki Hospital ay xabsiga ku sii jiraan saddex maalmood oo kale.
Go’aankan ayaa booliska fursad buuxda u siinaya in ay soo gabagabeyaan baaritaanada la xiriira xatooyada iyo ka ganacsiga carruurta yaryar.
Shalay ayay ahayd markii maxkamadda la soo taagay afar eedeysanayaal oo fal dambiyeedkan loo haysto.
Dhawaan ayay ahayd markii barnaamijka Africa Eye ee warbaahinta BBC-da lagu soo bandhigay xeelad qoto dheer oo ku saabsan ka ganacsiga dhallaanka.
Carruurtan ayaa mararka qaar si qarsoodi ah looga qaataa hooyooyinka darbi jiifka ah iyo kuwa qabo xanuunada dhimirka.
Sidoo kale waxaa uu barnaamijku shaaciyay in xita ay jiraan hooyooyin isbitaallada ku umulay oo dhallaanka loo beddelay ama loo sheegay in canugga uu dhintay in kastoo aan meydka lagu wareejin.
Booliska ayaa baaritaano ay sameyeen ku ogaaday in ganacsigan ay iska kaashadaan qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka,howlwadeenada xarumaha carruurta lagu xanaaneeyo iyo dadka sida gaarka ah barnaamijkan uga macaasho.
Taliyaha guud ee booliska Mr. Hillary Mutyambai ayaa dhawaan taliyaasha booliska ee ismaamullada ku amray in iyagoo kaashanaya saraakiisha waaxda daryeelka carruurta ay sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaano dheeraad ah ka sameyaan isbitaallada dowladda, kuwa gaarka ah iyo xarumaha xanaaneynta carruurta.
Booliska ayaa ugu dambeyn shacabka ugu baaqay in ay u soo gudbiyaan falalka ay ka shakiyaan ee la xiriira xatooyada carruurta waxayna ballanqaadeen in cidii xogtan gudbisa aan macluumaadkeeda la shaacin doonin.